HTC ဖုန်းအားလုံးအတွက် Root လုပ်နည်းလေးပါ ~ mgkhainghtoo
00:54 မောင်ခိုင်ထူး No comments
HTC ဖုန်းတွေ အတွက် One Click Root/Unroot လုပ်နိုင်တဲ့ tool လေးပါ။ HTC ဖုန်းအားလုံးကို support လုပ်ပါတယ်။ (According to Dev . :D)
* S-on ပဲ ဖြစ်ဖြစ် S-off ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Root/ unroot လုပ်နိုင်ပါတယ်။
*S-on ဆို၇င် Universal exploit ကို သုံးပါ။ S-off လုပ်ပီးသားဆိုရင် Insecure boot.img ကို သုံးပါ။
* Unroot လဲ ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
* Battery Stats and Dalvik Cache ကို clear လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
* Bootloader (ADB/fastboot), Recovery (ADB) ကို reboot ၀င်ပေးနိုင်ပါတယ်။
* Hboot image ထည့်ဖို.အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်
မလုပ်ခင် Setting ထဲကနေ USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်၊ 'Fastboot' under Power in Settings မှာ အမှန်ဖြစ်ကို ဖြုတ်ဖို. လိုပါတယ်။
HTC Quick Root v1.1.13 လိုချင်ရင်တော့အောက်မှာယူလိုက်နော်
Download link_ http://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=5b6ec53205ef9e5d89...
S-on ဖုန်း ဆိုရင် Universal Exploit ကို သုံးကြည့်ပါ။
Unlock bootloader လုပ်ပီးသားဆိုရင် insecure Boot.img ကို သုံးကြည့်ပါ။
credit by - www.mmcfamily.org